ဘောပွဲတွေ ပြန်စမယ့် အချိန် ကို ပြောပြသွားတဲ့ UEFA ဥက္ကဌ နဲ့ . . . . . မနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
ဘောပွဲတွေ ပြန်စမယ့် အချိန် ကို ပြောပြသွားတဲ့ UEFA ဥက္ကဌ နဲ့ . . . . . မနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
March 29, 2020 - by Editor
အာဆင်နယ် အသင်း ဟာ လီဗာပူး က ပစ်မှတ် ထားခဲ့ဖူး ပြီး လက်ရှိ ရီးရဲ ဘက်တစ် အသင်းမှာ ကစား နေတဲ့ လိုင်ယွန် တိုက်စစ်မှုး ဟောင်း နာဘီ ဖာကီယာ ကို ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် ဟာ ရာသီ အကုန် မှာ အငှား ခေါ်ထားတဲ့ ဒါနီ ဆီဘယ်ယော့ ကို အပြီးသတ် ခေါ်ယူ ဖြစ်မှာ မဟုတ်တာ ကြောင့် ဖာကီယာ ကို စိတ်ဝင်စား လာခဲ့ တာ ဖြစ်တယ် လို့ လည်း သတင်း ကြားသိ ရ ပါတယ် ။
UFC စတား ကော်နာ မက်ဂရီဂေါ် က တော့ မိခင် နိုင်ငံ အိုင်ယာလန် ကို Lockdown ပြုလုပ် ဖို့ စစ်တပ် ကို တောင်းဆို သွားခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဖီအိုရင်တီးနား အသင်း ခေါင်းဆောင် ပက်ဇယ်လာ က တော့ သူ ဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် တွေ့ရှိ ခဲ့စဉ် က အလွန် အမင်း ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့ ခဲ့ ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုရင်း အခု အချိန် မှာတော့ အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေတွေ ကို ကျော်ဖြတ် နိုင်ခဲ့ ပါပြီလို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် အသင်း အကြီးအကဲ အက်ဂါနယ်လီ ကတော့ စီးရီးအေ ကို ရပ်နား လိုက်တဲ့ အနေ အထား အတိုင်း အဆုံးသတ် ဖို့ ကို သဘောမတူ နိုင်ပါဘူး လို့ အရိပ်မြွက် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် တိုက်စစ်မှုး ပေါ်လို ဒိုင်ဘားလား မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် လက္ခဏာတွေ ရှိနေ ပေမယ့် သူ့ရဲ့ မိသားစု ကတော့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု မရှိခဲ့ဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။ ဒိုင်ဘားလား ဟာလည်း လာမယ့် အပတ် ထဲ မှာ ဒုတိယ အကြိမ် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ် ကာ အခြေအနေ တိုးတက် ဖို့ မျှော်လင့် ထားတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် နည်းပြ အန်တို နီယို ကွန်တီ ဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ် ကုသ ရေးမှာ အသုံးပြု ဖို့ အတွက် လက်တော့ကွန်ပျူတာ ၁၂ လုံး ကို ဝယ်ယူ လှူဒါန်း သွားခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်း ဟာ ဥရောပ ထိပ်သီး တွေ မျက်စိကျ နေတဲ့ ကွင်းလယ်လူ သောမတ်စ် ပါတေး ကို စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆို ပြီး စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေး ကို ယူရို သန်း ၁၀၀ အထိ ထားရှိဖို့ စီစဉ် နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အေတီကို ဟာ နာပိုလီ တိုက်စစ်မှုး မီလစ် ကို စိတ်ဝင်စား နေပြီး ဒီယေဂိုကော်စတာ နဲ့ အလဲ အထပ်ပြု လုပ်ဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
နယ်သာလန် ကလပ် အိုင်ယက်စ် ဟာ ဂီတာဖေး နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ယူရိုပါ လိဂ် ပွဲစဉ် မှာ ပရိသတ်တွေ ကို မထိန်းချုပ် နိုင် ခဲ့တဲ့ အတွက် UEFA က ယူရို ၅၃၂၅၀ ဒဏ် ရိုက် လိုက်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှုးဟောင်း ရီဗယ်ဒို က အသင်းဟောင်း အနေနဲ့ လူတာရို မာတီနက် ကို ခေါ်ယူမယ့် အစား နေမာ ကို ရအောင် ဦးစွာ ကြိုးစားသင့် တယ်လို့ အကြံပြု တိုက်တွန်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး အသင်း ဟာ အင်တာ မီလန် ကနေ ထွက်ခွာ လာဖွယ် ရှိနေတဲ့ ဥရုဂွေး ခံစစ်မှုးကြီး ဒီယေဂို ဂိုဒင် ကို စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
UEFA ဥက္ကဌ ဆီဖာရင် က သူတို့ ဟာ ရပ်နား ထားတဲ့ လိဂ်တွေ ကို ပြန်လည် စတင်ဖို့ အတွက် Plan A, B နဲ့ C ဆိုပြီး လျှာထားကာ မေလ အလယ် ၊ ဇွန်လ နဲ့ ဇွန်လ အလယ် တို့ မှာ စတင် နိုင်ဖို့ မျှော်မှန်း ထားတယ်လို့ ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။ ချန်ပီယံ လိဂ် နဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွေ ကိုတော့ သြဂုတ် မှာ အပြီးသတ် နိုင်ဖို့ ကြိုးစား သွားမယ် လို့လည်း ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး အသင်း ဟာ သူတို့ရဲ့ အစ်တီဟတ် ကွင်းကို ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကုသ တိုက်ဖျက်ရေး မှာ အသုံးပြု နိုင်ပါ တယ်လို့ NHS အဖွဲ့ ကို တင်ပြ ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
လာဇီယို အသင်း ဟာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ နွေရာသီ မှာ စာချုပ် ကုန်ဆုံးတော့မယ့် ပက်ဒရို နဲ့ ဂျီရူး တို့ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ် လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကတော့ ဂိုး သမား ကီပါ ရဲ့ နေရာကို အစားထိုးဖို့ အတွက် လိုက်လံ စာရင်း ပြုစု နေပြီး ဘိုင်ယန် ဂိုး သမားကြီး နူအာ ကိုပါ စောင့်ကြည့် လာခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ မတ်လ အတွက် တစ်လတာ အကောင်းဆုံး သွင်းဂိုး ဆု ကို ယူရိုပါ လိဂ် ပွဲစဉ် မှာ သွင်းယူ ခဲ့တဲ့ အီဟာလို ရဲ့ ဂိုးက ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကို ရောက်လာတာ မကြာသေးပေမယ့် တိုက်စစ်မှုးသစ် မာတင် ဘရိသ်ဝိတ ဟာ အသင်းရဲ့ နွေရာသီ မှာ ရောင်းထုတ်မယ့် ကစား သမား ၈ ဦး စာရင်းမှာ ပါဝင် လာခဲ့ပြီလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။